News of the World (2020) | MM Movie Store
ကိုဗဈကာလလညျးဖွဈတော့ ရုပျရှငျရုံတှနေဲ့လညျးဝေးတဲ့အပွငျရုံကားကောငျးတှလေညျး ထှကျဖို့ခကျခဲလာပုံရပါတယျ…အရမျးကိုကောငျးပါတယျဆိုတဲ့ကားတှဟော လကျခြိုးရလေို့တောငျရလာပါတယျ….ဒီတော့ ဝမျးသာစရာသတငျးကောငျးကတော့ကြှနျတျောတို့ရဲ့မငျးသားကွီး တှနျဟနျ့ရဲ့ကားသဈကွီးထှကျလို့လာတာပါပဲ….
ဘာကားလဲဆိုတာထကျ မငျးသားကွီးနာမညျပါရုံနဲ့ ပွညျ့စုံနတေယျလို့ပွောရငျမမှားပါဘူး…အငွိမျးစားခွလေငျြတပျသားဟောငျးဖွဈတဲ့ ကပ်ပတိနျ ဂကျြဖာဆငျကိုငျလျကဈဟာစိတျဝငျစားဖှယျ သတငျးလေးတှဖေတျပွပွီး ငှရှောရငျးတဈမွို့ဝငျတဈမွို့ထှကျသှားလာနတေဲ့သူပါ။
ဒီလိုလှညျ့လညျနရေငျးနဲ့ တဈနမှေ့ာနှဈအတျောကွာကွာ အငျဒီးယနျးသူပုနျတှရေဲ့ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ကိုငျအိုဝါမြိုးနှယျကလေးမလေးနဲ့ တှခေဲ့ပါတယျ။ကောငျမလေးကို သူ့ရဲ့ကနျြနတေဲ့မိသားစုဝငျတှဆေီ ပွနျပို့ခိုငျးပေးဖို့အကူအညီလိုကျရှာခဲ့တယျ….
ဘာသာစကားအခကျတှကွေောငျ့ရော လမျးခရီးမှာ အကွမျးဖကျအဖှဲ့စုံမြားနတောတှရေောဒုက်ခမြိုးစုံရှိနတေော့ ဒီအလုပျကို ပိုကျဆံရရငျတောငျကူညီဖို့လူမရှိကွဘူး…အဲ့ဒီနောကျတော့ သူကိုယျတိုငျပဲဒီ အန်တရယျလမျးကိုလိုကျပို့ပေးဖို့ဖွဈလာပါတော့တယျ….ထှထေူးတော့မညှနျးတော့ပါဘူး….ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး…..
ကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့လည်းဝေးတဲ့အပြင်ရုံကားကောင်းတွေလည်း ထွက်ဖို့ခက်ခဲလာပုံရပါတယ်…အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကားတွေဟာ လက်ချိုးရေလို့တောင်ရလာပါတယ်….ဒီတော့ ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီး တွန်ဟန့်ရဲ့ကားသစ်ကြီးထွက်လို့လာတာပါပဲ….
ဘာကားလဲဆိုတာထက် မင်းသားကြီးနာမည်ပါရုံနဲ့ ပြည့်စုံနေတယ်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး…အငြိမ်းစားခြေလျင်တပ်သားဟောင်းဖြစ်တဲ့ ကပ္ပတိန် ဂျက်ဖာဆင်ကိုင်လ်ကစ်ဟာစိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းလေးတွေဖတ်ပြပြီး ငွေရှာရင်းတစ်မြို့ဝင်တစ်မြို့ထွက်သွားလာနေတဲ့သူပါ။
ဒီလိုလှည့်လည်နေရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာနှစ်အတော်ကြာကြာ အင်ဒီးယန်းသူပုန်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကိုင်အိုဝါမျိုးနွယ်ကလေးမလေးနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးကို သူ့ရဲ့ကျန်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဆီ ပြန်ပို့ခိုင်းပေးဖို့အကူအညီလိုက်ရှာခဲ့တယ်….
ဘာသာစကားအခက်တွေကြောင့်ရော လမ်းခရီးမှာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စုံများနေတာတွေရောဒုက္ခမျိုးစုံရှိနေတော့ ဒီအလုပ်ကို ပိုက်ဆံရရင်တောင်ကူညီဖို့လူမရှိကြဘူး…အဲ့ဒီနောက်တော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲဒီ အန္တရယ်လမ်းကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်….ထွေထူးတော့မညွှန်းတော့ပါဘူး….ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…..